लिन छैन, एक छुट्टी मा ब्राजिल
ब्राजिलका मानिन्छ लागि धेरै आकर्षक स्थानीय पर्यटक छन्, तर पर्याप्त कारण छ किन यो राम्रो छैन भ्रमण गर्न यो देश । तपाईं पहिले-हावा बलियो छ भन्दा, यस्तो कारण छ । मासु धेरै खाने.
यस कारण पनि ब्राजिल मा वर्षा वन थियो तल कटौती र एक ठूलो मात्रा मा. र आनन्दित द्वारा एक बिचित्रको पिउन, तपाईं गर्न योगदान विनाश. भने पनि मासु छ, यो हुनेछ सबैभन्दा संभावना मृत्यु भोकभोकै बिदाहरू समयमा ब्राजील मा. रूपमा थाईल्याण्ड मा, ब्राजील मा यो धेरै साधारण छ सामना गर्न एक धेरै अप्रिय»आश्चर्य», जो तार्किक निम्नानुसार देखि विस्थापन को स्थानीय जनसंख्या मा जडान संग एक परिवर्तन को लिंग. तापनि तपाईं मा छन् विज्ञान र छुट्याउन देखि एक महिला, एक मानिस, नयाँ कुरा सिक्न मा ब्राजील यस अर्थमा छ । ब्राजील मा, त्यहाँ छ, एक धेरै अनौठो व्यवस्था अनुसार जो कार पर्छ जरूरी समर्थन को एक निश्चित प्रकार इथानोल कि तिनीहरूले उत्पादन देखि चीनी. यो थियो, गरेको छैन लागि पर्यावरण कारण गर्न, तर केवल समर्थन गर्न चीनी क्षेत्र मा एकड, ब्राजिल (चीनी को एक छ सबै भन्दा ठूलो निर्यात विभाग यो देश को). खैर, किनभने चिनी उद्योग ब्राजील मा छ बस रूपमा भ्रष्ट बाँकी रूपमा, देश पेट्रोल मूल्य सधैं माथि जाने. लघु सुन्दरता छ भनेर देखाउन सक्छौं कृपया कसैलाई. तथापि, तपाईं आनन्द उठाउन चाहन्छौं भने बालिका मा बिकनी कि सम्झना, तपाईं पनि हुनेछ देखिंदा एक कपाल, मिठास मानिस मा तंग शर्ट्स. ब्राजील मा, कुनै छन् — सबै कुरा स्पष्ट छ: एक यात्रा मा जान ब्राजिल स्थित, दुवै मा एक सहारा, को मुख्य उद्देश्य छ जो संग अधिक मुद्रा बनाउन पर्यटक, र झुपडबस्तीमा. आफ्नो विकल्प छ । ब्राजील मा, मौद्रिक नीति छ»मिल्दो संग»को विनिमय दर अमेरिकी डलर छ, तर लागत रहेको धेरै उच्च छ । पछि एक स्वादिष्ट खाने, निर्देशित पर्यटन र मा एक प्रवास एक आधुनिक नाइट क्लब मा, तपाईं जोखिम गणना बाँकी मुद्रा प्राप्त गर्न को अन्त गर्न आफ्नो छुट्टी । न्यानो घाम र निरन्तर वर्षा मुख्यको धेरै गीला मौसम अवस्था मा ब्राजील. यदि तपाईं घृणा चिस्यान, गर्मी र निसासिने काम को खतरा छ, यो जान राम्रो छ संग एक देश एक बैं जलवायु छ । परमेश्वरले निषेध गरेको छ कि तपाईं पकड एक फुटबल खेलमा बीच प्रशंसक मा तर, को विरोध टीम-अन्तिम सम्म सीटी बस अवस्थित छैन । प्रहरी र राजनीतिज्ञ ब्राजील मा लुकाउन छैन भन्ने तथ्यलाई तिनीहरूले सजिलै दूषित भएको छ, र केही मानिसहरू सामान्यतया रिश्वत लिन व्यापक डेलाईट मा. निस्सन्देह, कुनै पनि सरकारले गर्न सक्छन्, शायद भनिन्छ, तर केवल ब्राजील मा त्यहाँ यस्तो छ अहङ्कारको र भ्रष्टाचार । मलेरिया, एड्स, डेङ्गु यो एक पूर्ण सूची को रोगहरु कि तपाईं सामना गर्न सक्छन् ब्राजील मा तपाईं होसियार भएनौं भने पर्याप्त छ । निस्सन्देह, एउटै सकिन्छ भने बारेमा कुनै पनि अन्य देश छ, तर केही कारण लागि पर्यटक ब्राजील मा धेरै अक्सर भूल बारे. पर्यटक जो आउँछन् ब्राजिल ठीक गर्न धेरै अक्सर सिकार को डाँकुहरूको वा क्षुद्र अपराधीहरूलाई जसले सजिलै चोर्न एक झोला वा. र ती लागि जो, बैठक पछि चोर, प्रयास गर्न मदत लागि सोध्छन् प्रहरी र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न हस्तक्षेप, तिनीहरूले मात्र रहन मा अग्रिम गर्न तिनीहरूलाई इच्छा किस्मत । ब्राजील गरेको अर्थव्यवस्था छ, अक्सर रूपमा वर्णन छ, तर परीक्षण को सडकमा मा ब्राजिलियन शहर फेला गरिएको छैन — जीवित अवस्था अझै.
गरिब छन्, गरीब, र धनी धनी छन्
परिचित छ । योर»अद्भुत»कीरा, खतरनाक जनावरहरू छ कि संग गर्न केही खुवाउने, पर्यटक र एक बीहड भूभाग भन्ने माध्यम, चिस्यान, धेरै हुन्छ यस्तै एक दलदल. मा जाने भ्रमण पराउँछु गर्न उष्णदेशीय वन, पाठ्यक्रम, लायक छैन एक अनुभवहीन व्यक्ति ।, बोया र प्रतीक्षा गर्दै छन्, अब लागि प्रतीक्षा एक स्वादिष्ट खाने अगाडि केही पर्यटक । तपाईं कहिल्यै ब्राजिल जान र देख्न पनि टिप को एक सर्प गरेको पुच्छर, रन संग सबै आफ्नो खुट्टा. निस्सन्देह, प्रसिद्ध ब्राजिलका मेला को पूर्ण छ अविस्मरणीय भावना, तर तपाईं आउन भने ब्राजिल आफ्नो बच्चाहरु संग आराम गर्न मा एक शान्त वातावरण, यो पक्कै पनि छैन मेला । परिवार छुट्टियों ब्राजील मा एक, र शोर र उत्तेजना सँगसँगै हरेक मेला, परिवार पर्यटक पतन हुनेछ बस जस्तै कि छैन, मेरो स्वाद । वेश्यावृत्ति को एक छ. यो ठूलो समस्या मा ब्राजिल (अक्सर यहाँ»स्थानीय पुतलीहरु»बारी मा नाबालिग बालिका). तपाईं के जे, संग एक सम्बन्ध संग ब्राजिलका वेश्यांए, कहिल्यै — कुनै कुरा कसरी आकर्षक र सुलभ तिनीहरू थिए, तिनीहरूले जस्तै हेर्न थिएन बालिका । हो, तपाईं शायद बोल्न छैन पोर्चुगिज.
यति भने, तपाईं व्याख्या गर्न प्रयास वा केही सोध्न, वा बस सिक्न, त्यसपछि हो, यो शायद बस यो गले । तपाईं जान भने गर्न ब्राजिल र छ महिना लागि मा भर्ना एक भाषा स्कूल राम्रो छ, यो बारेमा भूल यात्रा । अर्को दुःखलाग्दो कुरा छ एक व्यापक समस्या मा एकड, ब्राजिल-अपहरण मा मान्छे ट्याक्सी लिएर र सम्म तपाईं प्राप्त. गुमाउन चाहनुहुन्छ सबै आफ्नो बचत र अन्त हुनुको मा गाडे एक प्वाल मा यी, घर मा रहन. ब्राजिलका प्रहरी प्रयोग एक अनौठो फारम को एक चेतावनी बारेमा अपराधको स्थानीय प्रहरी पक्राउ गर्न वा माथि पिटे, जो कुनै शंकास्पद देखिन्छ वा खतरा. एक खतरा छ कि कुनै एक निश्चित लागि थाह किनभने, ब्राजिलका प्रहरीले सञ्चालन मा गोप्य छ । चिनारी प्रहरी रिपोर्ट, घर रहन । ब्राजील मा, त्यहाँ छ छैन मात्र एक अविश्वसनीय स्तर, गरिबी को खतरा हिंसा र धेरै गरिब जीवित अवस्था, तर पनि निरन्तर उल्लंघन मानव अधिकार । तर संसारको बाँकी गर्न रुचि एक आँखा बारी गर्न यो सानो कुना को नरक, पक्कै पनि छैन, ब्राजील
← ट्विटर भावनाहरु च्याट